P&Q vokatra mahazatra Factory | China P&Q vokatra mahazatra mpanamboatra, mpamatsy
Hery: 80W, 150W
2. Chiples CREE> 100lm / w
4. Maty fanariana alimina 5. Fiainam-potoana:> 50.000hrs
2. Samsung 5630 nitarika> 95lm / w
4.die fanariana aluminium + diffuser PC fotsy:
6. Fahazoana miasa: Sensor, Emergency
Izy io dia ny IP65, IK10, mety indrindra ho antsika amin'ny rindrambaiko anatiny sy ivelany. Ny trano dia amboarina tanteraka eto Shina amin'ny alàlan'ny alimina polycarbonate sy die-cast avo lenta.
Jiro LED Bulkhead / EM Bulkhead
Fampisehoana avo lenta, marobe, hazavana mifanentana amin'ny taratra LED Bulkhead dia hazavana indostrialy avo lenta ary novolavolaina tamim-pitandremana tamina valin-kafatra avy amin'ireo ekipa mpitrandraka harena ankibon'ny tany mba hahazoana antoka fa hametrahana luminaire matanjaka sy tsy azo ravana.
● Fametrahana mora ● Famoronana havoana manerantany
● IP avo sy isa naoty misy fiantraikany ● Hita amin'ny maodely EM maranitra
Ny jiro mpampita ny tany am-boalohany, azo antoka, voaporofo.
Freelander dia natao hanomezana ny fomba mahomby indrindra amin'ny hazavana amin'ny alàlan'ny mpampita indostrialy sy ny lalambe, afaka manome ny farafahakeliny 30 lux miaraka amin'ny salan'isa 80 lux raha toa ka 12m ny elanelany miaraka amin'ny haavon'ny fametrahana 2.7m sy Fihodinana 5-degre. Fampiakarana ny bikan'ny fahombiazana sy ny fahombiazan'ny mpampita indostrialy sy ny jiro amin'ny arabe.
Ny famolavolana unibody matanjaka dia sady maivana no mora ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanamorana hifanaraka amin'ireo fametrahana spigot mount-indostrialy mahazatra. Ny sensor sensor an-trano namboarina dia hanao fifandimbiasana mandeha ho azy eo anelanelan'ny maody amin'ny alina mba hampihena be ny fanjifana herinaratra. Hita ihany koa ao amin'ny Wildlife / Turtle Friendly Amber.